တောင်သမန်သားလေး: February 2016
ဖုန်းထဲကနေ အသံသွင်းနိုင်တဲ့ Spreaker Studio v1.2.18 Apk
ဖုန်းနဲ့ အသံသွင်းတာတို့ အသံဖမ်းတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးဝင်တဲ့ Apk လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီ Apk လေးဖြင့်အသံသွင်းရာမှာ ကောင်းမွန်သောအချက်မှာ အသံဖမ်းနေစဉ်အချိန်မှ Apk ထဲမှာပါတဲ့ လက်ခုတ်တီးသံ, ရယ်သံ , သေနပ်ပစ်သံ , ကြောက်လန့် သံ စတဲ့အသံတွေကိုလည်းပါဝင်အောင်ထည့်လို့ ရပြီး နောက်တစ်ခုကလည်း Spreaker Studio မှာ Account လုပ်ပြီး LogIn ၀င်ထားသူအချင်းချင်း မက်ဆေ့များပို့ ချင်း LIVE စကားပြောခြင်းတို့ ကိုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
စမ်းသပ်အသုံးပြုလိုသူများအနေနဲ့Spreaker Studio အားအောက်မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာတီဗွီလိုင်းများနဲ့ နိုင်ငံခြားတီဗွီလိုင်းပေါင်းစုံကို ဖုန်းထဲကနေအလွယ်တကူကြည့်လို့ ရမယ့် H TV AEC v2.1.1
မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားအစီစဉ် (၄) လိုင်းပါဝင်ပြီး ထိုင်းနှင့် နိုင်ငံခြားတီဗွီလိုင်းများ အားလုံးပေါင်း တစ်ရာကျော်ပါဝင်တဲ့ TV App လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မိမိနှစ်သက်ရာတီဗွီလိုင်းများကိုကြည့်ရှုရာတွင် အင်တာနတ်လိုင်းအနည်းငယ်ကောင်းယုံဖြင့် လွယ်လွယ်ကူကူကြည့်နိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းထဲကနေ TV လိုင်းတွေကြည့်လိုသူများတွက်ဆောင်ထးလိုက်ပါ..အချိန်မရွေးဝင်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
နမူနာပုံလေးတွေကြည့်ပြီး အောက်မှာ Download ရယူလိုက်ပါ။
Posted by lin linn at 4:44 AM
ကိုယ့်ဖုန်း Screen ကို Rootမလိုဘဲ လွယ်လွယ်ကူကူ Video Recorder လုပ်ကြမယ်
Root လုပ်ထားစရာမလိုဘဲ ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ Screen မျက်နှာပြင်ကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့Video Recorder လုပ်ချင်သူများတွက် AZ Screen Recorder လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Apk လေးကိုနှိပ်လိုက်ယုံဖြင့်ပုံထဲကတိုင်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး အရှေ့ ဆုံးမှာတွေ့ ရတဲ့ Icon လေးကိုနှိပ်ပြီး Screen Recorder လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Video ရဲ့ Format Size တွေကိုလည်း Settion Icon လေးထဲမှာပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ File Size ကတော့ 2.8MB မျှသာရှိပြီး Android OS 5.0 အထက်ဖုန်းများတွင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့Screen Recorder လုပ်နိုင်သောကြောင့်လိုအပ်မူရှိသူများအောက်မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
♪ MasterCard က Passwords အစား Selfies နှင့် Fingerprints များကို အသုံးပြုမည် ♫
Credit Card Company တစ်ခုဖြစ်သော MasterCard က MWC ပွဲတွင် သူ၏ ကဒ်များကို အသုံးပြုသူများအတွက် အွန်လိုင်းတွင် ဈေးဝယ်ယူသည့်အခါ Passwords အစား Selfies နှင့် Fingerprints များကို အသုံးပြုမည်ဟု အတည်ပြုပါသည်။ အဆိုပါ Biometric Security နည်းပညာကို ကုမ္ပဏီက အမေရိကန်နှင့် နယ်သာလန်တွင် ယခင်နှစ်က စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ယခုအခါ နည်းပညာအသစ်ကို အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်နှင့် ကနေဒါနိုင်ငံတို့တွင် နွေရာသီ၌ ဖြန့်ချီမည်ဖြစ်သည်။
စနစ်အသစ်ကို နယ်သာလန်၊ ဘယ်လ်ဂျီယမ်၊ စပိန်၊ အီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ ဆွစ်ဇာလန် ၊ နော်ဝေး၊ ဆွီဒင်၊ ဖင်လန်နှင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံတို့တွင်လည်း ဖြန့်ချီပေးမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စနစ်သစ်ကို အသုံးပြုရန် ပီစီ၊ တက်ဘလက်နှင့် ဖုန်းများတွင် App တစ်ခုကို ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းတွင် ခရက်ဒစ်ကဒ်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးရမည်ဟု BBC က ပြောပါသည်။
အသုံးပြုသူများက ဖုန်းကင်မရာမှ ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ ဖုန်းမှ Fingerprint Scanner ကို အသုံးပြုခြင်းတို့ဖြင့် ငွေပေးချေရမည် ဖြစ်သည်။ Password များ ရိုက်ထည့်ရန် မလိုတော့သည့်အတွက် အလုပ်ရှုပ်သက်သာစေမည်ဖြစ်သည်။ ဓါတ်ပုံများဖြင့် လိမ်လည်မှုများ မဖြစ်စေရန် Selfie ရိုက်သည့်အခါတွင် မျက်တောင်ခတ်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။
LG ဖုန်းများကို Firmware တင်နည်း
How to flash LG ICS KDZ Firmware BY ooarkar(acme mobile)
Hello all ooarkar User ဦးလေးကြီးနေတဲ့ အရပ်ကလိုင်းမကောင်းတာကြောင့် post မတင်နိုင်တာ
အခုလိုင်းနည်းနည်းကောင်းတာကြောင့် မိတ်ဆွေတို့ အတွက်အကြိုရှိတဲ့ Postတခုကိုပုံနဲ့ တကွသေချာ ရှင်းပြပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် LG ဖုန်းများကို Firmwareတင်နည်းဖြစ်ပါတယ်
LG ဖုန်းများ Firmwareတင်နည်းကတော့ အတူတူပါပဲ Firmwareတင်နည်း ၂ခုရှိပါတယ်
(တစ်နည်းကတော့ Firmware dataရှိပြီး တင်နည်း) နောက်တစ်နည်းကတော့
(Firmware dataမရှိဘဲ တာရိုက် LG Flash Toolကနေ dataကို downယူ့ပီး Toolက auto Updateလုပ်ပေးတဲ့ နည်း)ဖြစ်ပါတယ်...
အခုဦးအာကာက ကိုယ်မှာရှိပြီးသား dataနဲ့ တင်နည်းကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီနေရာမှာ တခုပြောပြချင်းတာက ဦးအာကာ ဥပမာအနေဖြင့် LG SU760 ကို တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
အရင်ဆုံး LG Mobileတွေကို Firmwareတင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ Dataများကိုအရင်ဆုံးDownယူထားလိုက်ပါ
free Downloads link LG Firmware--LG Flash Tool 2014---DRIVERS
Download LG SU760 Stock ROM / Firmware
Face Book ဦးအာကာ-အမေး-အဖြေ groupထဲ
လိုအပ်တာdownယူပြီးပါက အရင်ဆုံး LG Driverကို installလုပ်ပေးလိုက်ပါ
ပြီးပါက မိမိတို့ downလိုရတဲ့LG Flash Tool 2014ကိုzipမဖြည့်ပဲဝင်လိုက်ပါ
ပုံ5ကိုလေ့လာလိုက်ပါ LGFlashTool2014ဆိုတဲ့ အပေါ်ဆုံးကစာကြောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါ
ပုံ6ကို ထက်လေ့လာကြည့်ပါ ပုံတွင်ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း မိတ်ဆွေတို့downလိုရရှိထားတဲ့ 
ဥပမာ မိတ်ဆွေက Cထဲမှာထည့်ထားတဲ့ ဆိုပါဆို Cထဲမှာမိတ်ဆွေကkdz ကိုရှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
ပုံ၈ကိုကြည့်ပါ Select KDZ File ဘေကအကွက်လေးမှာ
C:\_Users\_U Lay Gyi\_Desktop\_LG SU760\_LG SU760 firmware\_V30B_00.kdzပေါ်နေတာတွေရပါလိမ့်မယ်
ဒါဆို Firmware File ကိုထည့်ပြီးပြီးဖြစ်ပါတယ်
ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ က CSE Flash ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ
ပုံကို၉ကိုလေ့လာကြည့်ပါ မိတ်ဆွေတို့ က ဘာမှာထက်ဖြည့်ပေးစရာမလိုပါဘူး
User Account Control ဆိုပြီးတတ်လာပါလိမ့်မယ်
မိတ်ဆွေတို့Yes and No ရွေးခိုင်ရင်
ပုံ11ကိုကြည့်ပါ Volume +ကိုဖိနှိပ်ပြီး USB Cable ကိုထိုးလိုက်ပါ
ပုံ၁၂ကိုကြည့်ပါ အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာရင် Downoad Modeထဲရောက်သွားပါပြီး
ပုံ၁၃ကို ကြည့်ပါ Volume +ကိုဖိနှိပ်ပြီး USB Cableထိုးလိုက်တာနဲ့ မိတ်ဆွေတို့ က
LG Driverထည့်သွင်းထားတာကြောင့် မိတ်ဆွေတို့ ရဲ့ PCကLGဖုန်းကို Driverသိနေပါလိမ့်မယ်
အရေးကြီးဆုံးကတော့ မိတ်ဆွေတို့ ဖုန်းDriverသိဖို့ ကအရေးကြီးပါတယ်
Driverမသိရင်တော့ Firmwareတင်ဖို့အဆင်မပြေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်
Select Country & Langauage ရွေးခိုင်ပါလိမ့်မယ် LG Flash Tool 2014ကအခုဆိုဗာရှင်းအသစ်ထွက်ရှိနေပြီး
ဒါပေမယ့် ဗာရှင်းအသစ်တွေက နည်းနည်းရှုပ်သွားမှာဆိုတာကြောင့် LG Flash Tool 2014ပဲတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
စာကြောင်းတွေက တော့ ?????ပဲပေါ်နေပါလိမ့်မယ် ???ပေါ်လဲဘာဖြစ်လဲ ဦးလေးကြီးရှင်းပြပေးမှာပေါ့
Langauage ရွေးခိုင်တာကို okပဲနှိပ်ပေးလိုက်ပါ
ပုံ၁၄ကိုကြည့်ပါ Firmwareစပြီး flashနေပါပြီး
ပုံ၁၅ကိုကြည့်ပါ analysis စိစစ်ပြီးတာနဲ့Download အချက်အလက်တွေကိုauto ထက်တင်ပေးနေပါလိမ့်မယ်
ပုံ၁၆ကိုကြည့်ပါ Update ထက်ချပေးနေပါလိမ့်မယ်
ပုံ၁၇ကိုကြည့်ပါ Updateမြင့်နေရင် 94%လောက်မှာ ပါဝါကျသွားပါလိမ့်မယ်
ဒီနေရာမှာ တခုပြောချင်းတာကတော့ ပါဝါသွားတယ်ဆိုပြီး
USB Cable မဖြုတ်လိုက်ပါတယ် သူပါသာသူauto Firmwareတင်ပေးနေပါလိမ့်မယ်
Update 100%ပြပြီး Completeဆိုတဲ့ ဘက်ရောက်မှ USB Cable ကိုဖြုတ်ပါ
ဒါဆို LG SU760 ကိုFirmwareတင်လိုပြီးဆုံးသွားပါပြီး
ဒီလောက်ဆို LG ဘာပဲလာလာ ဆိုင်သမားတွေကော အခုမှစပြီး လေ့လာနေတဲ့ 
ဦးအာကာPostကိုပြန်လှန်Shareရင် Credit ပေးစရာမလိုပါဘူး
Labels: Android Firmware
♪ Samsung က ကားတွင် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်နိုင်မည့် ကိရိယာကိုမိတ်ဆက် ♫
Samsung က ဘာစီလိုနာတွင် ကျင်းပနေသော Mobile World Congress တွင် Samsung Connect Auto Dongle ကိုကြေညာခြင်းဖြင့် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်နိုင်သောကားနယ်ပယ်သို့ ၀င်ရောက်လာပါသည်။ Samsung Connect Auto သည် Tizen OS မောင်းနှင်သောပလတ်စတစ် ဘူးငယ် ဖြစ်ပါသည်။ ကား၏ OBD II Port တွင် ချိတ်ဆက်ရမည်ဖြစ်သည်။ Port ကိုယာဉ်မောင်းသူ၏ စတီယာရင်အောက်တွင် တပ်ဆင်ထားလေ့ရှိပါသည်။
ချိတ်ဆက်ပြီးသည်နှင့် ကိရိယာကကား၏ မောင်းနှင်သောအကွာအဝေးနှင့် အချိန်၊ လောင်စာဆီ၏ ကုန်ကျစားရိတ်တို့ကိုတိုင်းတာတွက်ချက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ကိရိယာတွင် 4G LTE ဆက်သွယ်မှု နည်းပညာပါရှိပြီးကောက်ယူထားသောဒေတာများကိုအင်တာနက်မှတစ်ဆင့် Cloud အခြေပြု ဆာဗာများထံသို့ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဒေတာများဖြင့် ကားပျောက်လျှင် ရှာဖွေသည့် “ Find My Car” စွမ်းဆောင်ချက်၊တည်နေရာကိုတွက်ချက်သည့် GPS App နှင့် အခြားလုံခြုံရေးစွမ်းဆောင်ချက်များကို Android , iOS Device များမှနေ၍ ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
4G LTE ဆက်သွယ်မှုသည် ကား၏ ဒေတာများသာမကဘဲခရီးသည်များ၏ မိုဘိုင်းကိရိယာများအတွက် အင်တာနက်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ Samsung ကယခုနှစ် ဒုတိယကွာတားတွင် အမေရိကန်၌ Connect Auto ကို ဖြန့်ချီပေးမည်ဖြစ်ပြီး AT&T နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ အခြားနိုင်ငံများတွင် ယခုနှစ် တတိယကွာတားတွင် ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုက်စားနေသူများအတွက် - ENGLISH GRAMMAR PRO V2.1.0 APK
Android /Tablet ဖုန်း ကိုင်ဆောင်ကာ ENGLISH GRAMMAR PRO V2.1.0 APK အသုံးပြုလိုသူများအတွက် 27 ရက်နေ့2လပိုင်းက Update တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ English Grammar နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ သင်ခန်းစာပေါင်းများစွာ ကိုလေ့လာနိုင် လေ့ကျင့်ဖြေဆိုနိုင်မယ့် ဆော့ဖ်ဝဲ လေးပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 6.3MB ရှိပြီး Android Version 2.3 နှင့်အထက်ရှိတဲ့ ဖုန်းများမှာထည့်သွင်း install လုပ်၍အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Posted by lin linn at 3:31 AM
မေး - X.Bo ဖုန်း Firmware တင်နည်းဖြစ်သည်။
ဖြေ - - X.Bo
Firmware သည် SP. Flash Tool နဲ့ရေးပါသည်။ Firmware သည် (.txt)
နဲ့လာပါသည်။ လွယ်ပါသည်။ အဓိကအချက်ကတော့ Display Error ပြဿနာပါ။ အခုတော့
လွယ်သွားပါပြီ။ Firmware File ထဲမှာပါလာတဲ့ U Boo T File ကို
အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပါ။ ဒါဆို OK သွားပါပြီ။ မှတ်ချက် - Firmware မတင်ခင် U Boo
မေး - ကျွန်တော့်ဖုန်းလေးက iPhone 5S လေးပါ။
ကျွန်တော့် ဖုန်း Passcode ကို ဂဏန်းတွေနဲ့မပေးဘဲ အက္ခရာတွေနဲ့ပေးချင်
လို့ပါ။ အဲ့လို Passcode ကို အက္ခရာနဲ့ပေးလို့ရလားခင်ဗျာ။ ပေး လို့ရရင်
ဖြေ - ဟုတ်ကဲ့။ iPhone Passcode ကို
ဂဏန်းနဲ့မဟုတ်ဘဲ အက္ခရာနဲ့ Passcode ပေးလို့ရပါတယ်။ iPhone ရဲ့ Setting
ထဲကိုဝင်ပါ။ Touch ID & Passcode ထဲကိုဝင်ပါ။ Simple Passcode ကို
Off ပါ။ Turn Passcode ကို On ကိုနှိပ်ပါ။ အက္ခရာနဲ့ Passcode
ပေးခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ မိမိကြိုက်နှစ် သက်ရာအက္ခရာနဲ့ Passcode ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးလျှင် ဖုန်းကိုLock ချ ကြည့်ပါ။ Lock ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါ။ အက္ခရာနဲ့
မေး - အစ်ကိုရေ ကျွန်တော့်ဖုန်းက Y- 511 Huawei အမျိုးအစား ပါဗျာ။ ရုပ်ထွက်မလာဘူးဗျ။ LCD က ဖွေးနေတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဗျာ။
ဖြေ - Y- 511 တွေမှာဆိုရင် Coil, Condencer, Diocle တို့က Backlight အ
ပိုင်း မှာ အဓိကလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ အခုလို LCD ဖွေးနေတာကတော့ LCD Connector
နားက Fuse လုံးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Fuse
ကျွန်တော်ကတော့ iPhone 5S ကိုင်ပါတယ်။ လက်ဗွေစနစ် ကိုပါအသုံးပြုထားပါတယ်။
ပြီးနောက် ကျွန်တော် Soure Add ပြီးနောက် Data တစ်ခုကို Install
လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Reset ကျသွား ပြီး ပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာ
လက်ဗွေစနစ်အလုပ်မလုပ်တော့ ပါဘူး။ Password ကလည်း
ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးဖြစ်နေ တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါဗျာ။
ဖြေ - အစ်ကို့ရဲ့ Device ကို အရင်ဆုံး Update လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ Update
ပြီးမြောက်သွားတဲ့အခါကျရင် လက်ဗွေစနစ်ရော Passcode စနစ်ပါ
ပျက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဆင်မပြေခဲ့ရင်တော့ Update Firmware
ကိုတင်ကြည့်လိုက်ပါ။ အထဲမှာရှိတဲ့ Data တွေတော့ အကုန်လုံးပျက်
သွားပါလိမ့်မယ်။ iCloud ခံထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Password ကိုတော့
မေး - ကျွန်တော်ကတော့ G- 610 ကိုကိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ China Software တစ်ခုကိုဖျက်လိုက်မိပါတယ်။
ဖျက်ပြီးတဲ့နောက် ပိုင်း ဘယ် Software ထဲကိုဝင်ဝင် စာတန်းတစ်ကြောင်းပေါ်လာ
ပြီး Error ပြနေပါတယ်။ OK ကိုနှိပ်လည်း ခဏခဏပြန်ပေါ်နေပါ တယ်။
ဖြေ - ဟုတ်ကဲ့ပါအစ်ကို။
များသောအားဖြင့် ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Original Software
တွေကိုဖျက်လို့မရပါဘူး။ ဖျက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း Error တက် နိုင်ပါတယ်။
အစ်ကိုလုပ်လို့ရတာကတော့ Setting ထဲကိုဝင်ပြီး Backup & Reset
ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Factory Data Reset ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အစ်ကို့ရဲ့ Device
ထဲက Dataတွေတော့ပျက်သွားမှာပါ။ Memory Card ထဲ Data တွေတော့မပျက်ပါဘူး။
Reboot ကျသွားပြီး ပြန်တက်လာတဲ့အချိန် ကျရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
မေး - ကျွန်တော့်ဖုန်းက G 610ပါ။ Touch ပြားလဲလိုက်ပြီးမှ Network မသိတော့လို့ပါ။ ကူညီပါဦးခင်ဗျာ။
ဖြေ - G 610 မှာ Touch ပြားလဲရင် ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။ Body Cover
လဲလိုက်ရင်တော့ ရတတ်တာမျိုးရှိပါတယ်။ Network ငုတ်လေး
တွေကျိုး/မကျိုးကိုလည်း စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ကျိုးနေရင် အသစ်
မေး - Huawei 730U00 တစ်လုံး Earpiece မကောင်းလို့ပါ။ လဲချင် ပါတယ်။
ဖြေ - ကျွန်တော်က Earpiece ကိုလဲလှယ်ပေးပေမယ့် ဖုန်းက Speaker
မှာအသံမထွက်တော့ပါဘူး။ တစ်ခါ Speaker ထပ်လဲပေးရပါတယ်။ ပြောချင်တာက Earpiece
ဟာ Speaker ကြောင့် Error တက်ပါတယ်။ Earpiece က တကယ်တမ်းကောင်းပါတယ်။
Earpiece ကို သူ့ Original ပဲပြန်ထည့်တော့အဆင်ပြေပါတယ်။ Speker ကြောင့်လည်း
ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၃၃၉၆၆၊ ၀၉-၄၂၁၇၄၄၁၁၁ မှ ကူညီပံ့ပိုးပါသည်။
Website တကယ်တမ်းရေးသည့်အခါယခင်ကဆိုလျှင်HTML နှင့်CSS တို့ကို
နားလည်ရန်လိုသည်။သာမန်လူတစ်ယောက်HTML သုံး၍Website ရေးတတ်
တာဘာသာစကားမှသိစရာတတ်စရာမလိုတော့ဘဲWebsite အသင့်ရေး နိုင်သည့်tool
များပေါ်လာသည်။WYSWYG (What you see is what you Get)
ရောက်ရှိလာပါပြီ။Androidစမတ်ဖုန်းပေါ် မှနေ၍Website ရေးခွင့်ရစေ
သည့် option များစွာထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။Website အလွယ်ရေးလိုသူ
အတော်များများမှာHTML နှင့်CSS လေ့လာရန်အချိန်မရှိသဖြင့်အမြင်နှင့်
တော်သလိုရေးသော Website တို့သည်အမှန်တကယ်တတ်သူ အကြမ်းထည် မှ စ၍ရေးသောWebsite
တစ်ခုရေးနိုင်ပါပြီ။ပထမဆုံးWeeblyကိုGoogle play store ပေါ်တက်၍download
ဆွဲချပါမည်။Mobogeneနှင့်One mobile website
သည်။Weeblyကအခမဲ့ဖြစ်သည့်အပြင်install လုပ်ရန်အတွက်လည်းအချိန် များများ
မယူပါ။Weeblyအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြုစရာ တစ်ချက်
ရှိပါသည်။ယင်းမှာတတ်နိုင်သမျှအရွယ်အစားကြီးသောစမတ်ဖုန်း (အနည်း ဆုံး
၅.၅လက်မ) ကိုသုံးရန်ဖြစ်ပါသည်။တက်ဘလက်သုံးလျှင်ပိုကောင်း ပါသည်။
ပြေပါမည်။WeeblyကိုPlay Store မှာတိုက်ရိုက်install လုပ်ပေးသည်ဖြစ်၍
Websiteတစ်ခုမရေးမီဦးစွာaccount တစ်ခုပြုလုပ်ရန်လိုပါသည်။ယင်း account
အသစ်ကိုFacebook account သို့မဟုတ်Google account (Gmail account)
သုံး၍sign in ၀င်နိုင်ပါသည်။ဘာတစ်ခုမှမရှိလျှင်createanew account
အတိုင်းသုံးသွားပါ။အကယ်၍Facebook သို့မဟုတ် Google account
ပါမည်။ယင်းကိုလက်ခံနိုင်မည်ဟုဆိုလျှင်agree ဟုခေါ်သောနေရာကို တစ်ချက်
သီးခြားProfile ဖြင့်သီးခြားaccount လုပ်ခြင်းကပို၍အဆင်ပြေ ပါမည်။
account အသစ်တစ်ခုကိုစတင်အသုံး ပြုနိုင်ရန်အတွက် (အင်တာနက်
လိုင်းကောင်းလျှင်) စက္ကန့်အနည်းငယ်သာကြာပါမည်။Signin ဖြင့် မိမိ၏ Weebly
account ထံသို့ဝင်ပြီးပြီဆိုလျှင်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသော Website
ဖန်တီးခြင်းအလုပ်ကိုစတင်နိုင်ပါပြီ။Website တစ်ခုစတင်ရန် အတွက်ပထမဆုံးTheme
ရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှ ပြုပြင်နိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ယင်း၏ နောက်တစ်ဆင့်
သည်။မိမိအလိုရှိသောTemplate တစ်ခုဖန်တီးပြီးသည့်အခါယင်းထဲရှိ အရာ
interface ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းထဲတွင်website
ပြည့်စုံစွာပါဝင်ပါသည်။Head line box နေရာတွင်နှစ်ချက်ခေါက်ပြီး
မိမိထည့်သွင်းလိုသောHead line ကိုထည့်သွင်းပေးပါ။ယင်းအလုပ်ကိုtext editor
သတိထားရမည့်အချက်တစ်ခုမှာမတူညီသောTemplate အမျိုးမျိုး အတွက် edit
လုပ်နိုင်သောရှုထောင့်များလည်းကွဲလွဲမည်ဖြစ်ရာTemplate တစ်မျိုး တွင်
ပြောင်းလဲသည့်နည်းလမ်းအတိုင်းbuttom text ကိုနှိပ်ပြီးheader အတွက်
editorကိုသုံး၍link များ ပြုလုပ်သည့်အခါမိမိ၏webisteအတွင်းရှိpage
များအားlink ချိတ်ပေးသလို ပြင်ပရှိwebisteများနှင့်လည်းlink ချိတ်ပေးနိုင်
သည်။ ပြင်ပwebsite များနှင့်link ချိတ်မည်ဆိုလျှင်editor ထဲ၌မိမိချိတ်လို
link ချိတ်ပေးရန်အတွက်မိမိချိတ်လိုသောpage ကိုရွေးချယ်ပေးရုံသာ
ရှိပါသည်။Header ကိုမိမိစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးပြီးသောအခါယင်းအောက်မှbody text
ဖန်တီးရမည့်အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ +icon ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။ မိမိ၏ page
အတွင်းထည့်သွင်း၍ရနိုင်သည့်element များကိုလာ၍ဖော်ပြပေး ပါမည်။
ဖြစ်သော်လည်းကြည့်ပျော်ရှုပျော်website တစ်ခုဖြစ်ရန်အခမဲ့ပေးထားသော element
အတွင်းထည့်သွင်းနိုင်မည့်content များအတွက် parameter
ဆွဲပြီးselect လုပ်ပါ။text icon ကိုနှိပ်ပြီးစာသားများကိုပြောင်းလဲပါ။ drag
and drop သည်weebly၏အခြေခံကျသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
ကိုနှိပ်ပြီးမိမိထည့်သွင်းလိုသောအရာကိုရွေးချယ်ပါ။ ယင်းနောက် page
အတွင်းမိမိထားလိုသောနေရာ၌ယင်းကိုထားလိုက်ပါ။ဥပမာပြရမည် ဆိုလျှင်image box
ကိုdrag ဖိပြီးဆွဲပါ။မိမိပြလိုသောနေရာတွင် ယင်းပုံရိပ် ကိုထားပြီးdrop
ချလိုက်ပါ။သို့သော်drag and drop လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်
အတွက်မတူညီသောpage သုံးမျိုးရရှိပါမည်။ယင်းpage တစ်ခုစီကိုedit
လုပ်ရန်လိုကောင်းလိုနိုင်သည်။screen ၏ထိပ်ဘက်ပိုင်းတွင်ရှိသောpage icon
ကိုခေါက်ပြီးpage အသစ်များထည့်သွင်းနိုင်သည်။အလားတူပင် မိမိ၏page
အမည်များကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ယင်းpage တို့သည်drop-down menu
အတွက်လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်သွင်းပြီးပြီ ဆိုသည့် အခါscreen
၏အပေါ်ဘက်တွင်မြင်နေရသောpreview button ကိုတစ်ချက် ခေါက်ပြီးwebsite
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မည်သို့မြင်ရမည်ကိုလည်းကောင်း၊ mobile device
ပေါ်တွင်မည်သို့မြင်ရမည်ကိုလည်းကောင်း ပြသပေး ပါမည်။မျက်စိရှေ့တွင်
မြင်ရသည့်အပြင်အဆင်အားလုံးကိုကြိုက်ပြီဆိုလျှင်publish button ကိုနှိပ်ပြီး
(URL) တစ်ခုကိုပါဖန်တီးပေးခြင်းမှာWeebly၏ချစ်စရာစွမ်းဆောင်ရည် ဖြစ်ပါသည်။
How To Root Samsung Galaxy A8 Lolipop 5.1.1 - SM-A800F/A8000/A800I
Samsung Galaxy A8 Lolipop 5.1.1 ကို Root ပြုလုပ်နည်းကိုတောင်းဆိုထားလို့ အားလုံးအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်မျာ....
Samsung Galaxy A8 ရဲ့ Model တွေဖြစ်တဲ့ SM-A800F , A8000 , A800I စ,တဲ့ မော်ဒယ်လ်တွေအတွက်ပါ...။
(ဘာမှ မလုပ်ခင် ဖုန်းထဲက အရေးကြီးတာတွ အားလုံးကို Backup လုပ်ထားပါ)
Email (Gmail) ကို Singout လုပ်ပါ...
Phone Setting > Developer Option မှ OEM unlocking ကို Enable လုပ်ထားပါ...
Driver လိုပါမယ် Samsung Android USB Driver မရှိသေးရင် ဒီမှာ ဒေါင်းယူ Install လုပ်ပါ...
အောက်မှာ တင်ပေးထားတဲ့ CF Auto Root ဖိုင်လ်ကို မိမိဖုန်း Model အလိုက် မှန်ကန်စွာရွေးချယ် ဒေါင်းယူပြီး CF Auto Root.Zip ဖိုင်လ်ကို Desktop (သို့) နှစ်သက်ရာ တနေရာမှာ ဖြည်လိုက်ပါ..
ဖြည်ထားတဲ့ Folder ထဲမှ Odin3-v3.10.6 ကို Run ပါ...
AP မှတဆင့် စောစောက Folder ထဲမှ CF-Auto-Root-a8elte-a8eltejv-sma800?.tar.md5 ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ.. [နံပါတ် (1)]
ဖုန်းကို Power Off (ပိတ်) ပါ...
Volume Down + Home + Power ဆိုတဲ့ ခလုတ် သုံးခုကို တပြိုင်တည်း ၁၀ စက္ကန့်လောက် တွဲနှိပ်လိုက်ပါ...
Download Mode ကို ရောက်သွားပြီဆိုရင် USB ကြိုးမှတဆင့် ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ..
Odin မှ Start ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ... ခဏနေရင် အလိုလျှောက် Restart ကျပြီး ဖုန်းပြန်တတ်လာရင် Root ဖေါက်တာ အောင်မြင်သွားပါပြီ...။ [နံပါတ် (2)]
Posted by lin linn at 2:58 AM
ဖုန်းထဲကနေ အသံသွင်းနိုင်တဲ့ Spreaker Studio v1.2.1...
ကိုယ့်ဖုန်း Screen ကို Rootမလိုဘဲ လွယ်လွယ်ကူကူ Vid...
♪ MasterCard က Passwords အစား Selfies နှင့် Finger...
♪ Samsung က ကားတွင် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်နိုင်မည့် ကိရ...
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုက်စားနေသူများအတွက် - ENGLISH GRAM...
Samsung Galaxy A7 SM-A7009 ဖုန်းကို Root လုပ်နည်း
ဟက်ပီးနံပါတ်မှ Telenor Myamar နှင့် MPT နံပါတ်များ...
Samsung Galaxy Grand2LTE SM-G7105L ဖုန်းဗားရှင်း...
MPT data များည apk ​လေပါ
ဇော်ဂျီဖောင့်ရော ယူနီကုတ်ဖောင့်ကိုပါ ထည့်သွင်းနိုင...
ဘောလုံးပွဲ ရလဒ်တွေကို ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် Soccer Cent...
Android 5.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများကို Adb မှ Zawgyi Fo...
All 2Line Apps For Android apk စုစည်းမူ
♪ သင့်Android ဖုန်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတိုးတက်လ...
Android မိုဘိုင်းဖုန်းထဲကနေ ကွန်ပျူတာကိုထိန်းချူပ်...
KingRoot v4.8.0 ဗားရှင်းအသစ်ထွက်ပါပြီ
YouTube မှ ဗီဒီယိုဖိုင်များကိုဒေါင်းယူနိုင်တဲ့ Sna...
Android စမတ်ဖုန်းတွေကို Root လုပ်နိုင်တဲ့ Kingo RO...
Adobe Photoshop Express v2.6.3 APK
♪ ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်သုံးတဲ့အခါ ဘေလ်တွေအရမ်းကုန်နေတာ...
Android ဖုန်းနှင့် Tablet တွေမှာအသုံးများတဲ့ -Vibe...
♪ Android နဲ့ IOS တွေထဲက Shortcuts တွေကို ဘယ်လိုသံ...
Samsung Galaxy Tab310.1 GT-P5220 အတွက်ဗားရှင်း 4...
♪ Google Play Sotre & Services မရသူများအတွက် - Ser...
Huawei Handset ၇၀ ကျော်ကို Root ဖောက်နည်း (စာအုပ်)...
မြန်မာဘာသာ Language မပါတဲ့ဖုန်းများတွက် မြန်မာဘာသာ...
Huawei ဖုန်းများတွက် Root မလိုဘဲမြန်မာစာထည့်သွင်းန...
Android OSဖုန်းများအား ယူနီကုတ်မြန်မာဖောင့်ထည့်သွင...
ဖောင့်စတိုင် အမျိုးမျိုးတွေကို အလွယ်ဆုံး ထည့်သွင်း...
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G531F ဖုန်းဗားရှင်း ...
♪ 1MB ကိုပြား၈၀ သာကျသင့်မည့် အသက်သာဆုံးအင်တာနက် Pl...
Samsung Galaxy J7 SM-J700F ဖုန်း Version 5.1.1 ကို...
Facebook ပေါ်က Video တွေကို ခပ်မြန်မြန်ဒေါင်းယူမယ် ...
♪ သင့်ရဲ့ ဖုန်းမှာ Storage မကုန်စေဖို့ နည်းလမ်း သံ...
Samsung J5 J500H Android Version 5.1.1 Root လုပ်နည...
တရုတ်ဖုန်းတွေအတွက် Root Tool For All China Tablets...
♪ Android ဖုန်းမှာ အခမဲ့ရယူနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး An...
Android စမတ်ဖုန်းအားလုံးကို Root လုပ်နည်းလေ့လာကြရေ...
ဖုန်းဖြင့် သင်္ချာပုစ္ဆာများကိုတွက်ချက်နိုင်တဲ့ Scien...
Samsung Galaxy J2 ကို ဖုန်း/ကွန်ပျူတာ နှစ်မျိုးလုံ...
Facebook မှာ ဗီဒီယိုများ တိုက်ရိုက် ရိုက်ကူး ထုတ်လ...
ဖုန်းထဲကနေ ကာရာအိုကေစာတန်းထိုးနှင့် ဗီဒီယိုတေးဖြတ်...
ကိုယ့် Viber ထဲကအချက်အလက်တွေကို သိမ်းဆည်းနိုင်မယ့်...
သူငယ်ချင်းတွေကို မိမိဖုန်းထဲ့က Applicationတွေကို အ...
ဓာတ်ပုံပြင် ကလိချင်သူများအတွက် Insta Square Size -...
ဖုန်းမှာ မလိုတော့တဲ့ Task တွေကိုဖျက်ပေးနိုင်မယ့် -...
♪ iPhone တွေလုံးဝသုံးမရဖြစ်သွားစေတဲ့ ‘Error 53’ ကိ...
ဖန်သားပြင်ကို ကွေးညွတ်ကာ လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးလ...
ဖုန်း Screen Recorder လေး - AZ Screen Recorder – N...
Root မလိုပဲ မိမိဖုန်းScreenshot ပုံကို ရိုက်ပေးနို...
ဖုန်းမှာ Screenshot ပုံတွေကို အကောင်းဆုံး ပြုလုပ်န...
ဖုန်းဘေမရှိဘဲ အင်တာနတ်ဖရီးသုံးနိုင်မည့် အသစ်လေး ထွ...
ဖုန်းပြောသံများကို ဖမ်းယူထားနိုင်တဲ့ Call Recorder...
ဖိုတိုရှော့အသုံးပြူသူများအတွက် အလှပန်းကလေးများ ၁၃ပ...
Android ဖုန်းပေါ်မှာ 3D စာလုံး ဒီဇိုင်းလေးတွေနဲ့ ရေ...
ဖုန်း Launcher အနက်ရောင်ဒီဇိုင်းအလန်းလေး - Basic B...
Lenovo A7000 -a -V5.0 ကို Root ဖောက်ပြီး မြန်မာစာ ...
Android ဖုန်းထဲကနေဆော့ကစားနိုင်တဲ့ ပိုက်ကျော်ခြင်း...
ကိုယ့်ဖုန်းအတွက် အလှဆုံးနဲ့ အလန်းဆုံး Myanmar Keyb...
Sony Xperia Z3 ဖုန်း ဗားရှင်း Android 5.0.2 Lollip...
YouTube ထဲက ဗီဒီယိုများကို ဗားရှင်းအသစ် TubeMateြ...
Samsung User ​တွေအတွက် Samsung information apk
မိမိထံသို့ ဖုန်းဝင်လာသည့်အခါ ဗီဒီယိုဖြင့်လက်ခံနိုင...
Battery Number တွေကိုကြည့်ရန်အတွက်ဆော့ဝဲ
Samsung Galaxy E5 SM-E500F ဖုန်းဗားရှင်း Android 5...
♪ MPT ၏ အလိုလျောက်အင်တာနက် Setting ချိန်ခြင်း စတင်...